Shuruudaha iyo shuruudaha - Gambling Papa
1 Shuruudaha iyo xaaladaha
1.3 Isku xirnaanta Mawduucyadeena
1.5 Mas’uuliyadda Mawduuca
1.7 Boos celinta xuquuqda
1.8 Ka saarida xiriiriyeyaasha shabakadeena
Ku soo dhowow Khamaarka Papa!
Shuruudahaan iyo shuruudahan waxay tilmaamayaan qawaaniinta iyo qawaaniinta loo adeegsado Websaydhada Khamaarista, oo ku taal https://gamblingpapa.com.
Markaad gasho degelkan waxaan u maleyneynaa inaad aqbashay shuruudaha iyo shuruudaha. Ha u sii wadin isticmaalka Khamaarka Papa haddii aadan oggolaan inaad qaadatid dhammaan shuruudaha iyo xaaladaha lagu sheegay boggan.
Ereybixinta soo socota waxay khuseysaa Shuruudahaan iyo Shuruudaha, Bayaanka Asturnaanta iyo Ogeysiiska Diidmada iyo dhammaan Heshiisyada: “Macmiil”, “Adiga” iyo “Kan” ayaa adiga kuu tilmaamaya, qofku wuxuu galayaa websaydhkan oo u hoggaansamayaa shuruudaha iyo shuruudaha Shirkadda. “Shirkadda”, “nafteenna”, “Annaga”, “Kuweenna” iyo “annaga”, waxaa loola jeedaa Shirkaddayada. “Xisbiga”, “Xisbiyada”, ama “Annaga”, waxaa loola jeedaa macmiilka iyo nafteenaba. Dhammaan shuruudaha waxay tixraacayaan soo-jeedinta, aqbalaadda iyo tixgelinta bixinta lacag bixinta ee lagama maarmaanka u ah in la qaado geeddi-socodka kaalmadeena macmiilka sida ugu habboon ee loogu talagalay ujeeddada cad ee ah la kulanka baahiyaha Macmiilka ee la xiriira bixinta adeegyada ay sheegtay Shirkadda, iyadoo la raacayo oo ku xiran, sharciga jira ee Nederland. Isticmaal kasta oo eraybixinta kor ku xusan ama ereyo kale oo keli ah, jamac, xarfo weyn iyo / ama isagu / iyadu ama iyadu, waxaa loo qaadaa inay yihiin kuwo la isku beddeli karo sidaa darteedna loola jeedo isku mid.
Waxaan shaqaaleynaa isticmaalka buskudka. Markaad marin u hesho Khamaarka Papa, waxaad ogolaatay inaad adeegsato cookies-ka si waafaqsan heshiiska Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Khamaarka.
Inta badan websaydhyada is-dhexgalka leh waxay adeegsadaan buskudka si ay noo oggolaadaan inaan la soo baxno faahfaahinta isticmaale booqashada kasta. Kukiyada waxaa adeegsada degelkeenna si ay awood ugu siiso ka shaqeynta meelaha qaarkood si ay ugu fududaato dadka booqanaya degelkeenna. Qaar ka mid ah shuraakadayada iskaashiga / xayeysiinta ayaa sidoo kale adeegsan kara cookies.
Haddii aan si kale loo sheegin, Khamaarka Papa iyo / ama shati bixiyeyaashu waxay leeyihiin xuquuqda lahaanshaha aqooneed ee dhammaan waxyaabaha ku jira Khamaarka Papa. Dhammaan xuquuqda lahaanshaha aqooneed way keydsan yihiin. Waxaad ka heli kartaa tan Khamaarka Papa si aad u adeegsato shaqsi ahaaneed oo lagugu soo rogay xayiraad lagu dejiyay shuruudaha iyo shuruudaha.
Dib uga daabac walxaha Khamaarka Khamaarka
Ili, kiro ama wax liisanka sub-ka Khamaarka Papa
Soo-saar, nuqul ama nuqul ka soo qaad Khamaarka Papa
Ka qaybiso waxyaabaha ku jira Khamaarka Papa
Heshiiskani wuxuu bilaabmi doonaa taariikhda halkan. Shuruudaheena iyo Xaaladaheena waxaa la abuuray iyadoo la kaashanayo Generator-ka iyo Shuruudaha Generator iyo Abuurista Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah .
Qeybo ka mid ah degelkani wuxuu fursad u siiyaa dadka isticmaala inay soo diraan oo ay is dhaafsadaan fikradaha iyo macluumaadka meelaha qaarkood ee websaydhka. Khamaarista Papa ma shaandheeyo, ma saxo, ma daabaco ama ma faallooto Faallooyinka ka hor intaanay joogin websaydhka. Faallooyinku kama tarjumayaan aragtiyaha iyo fikradaha Khamaarka Papa, wakiiladeeda iyo / ama kuwa ku xiran. Faallooyinka waxay ka tarjumayaan aragtida iyo ra’yiga qofka soo qoro ra’yigooda iyo ra’yigiisa. Ilaa xadka ay oggol yihiin sharciyada khuseeya, Khamaarka Papa mas’uul kama noqon doono faallooyinka ama wixii mas’uuliyad ah, waxyeelada ama kharashyada keena iyo / ama la silcayo adeegsiga iyo / ama dhajinta iyo / ama muuqaalka Faallooyinka degelkan.
Khamaarista Papa wuxuu xaq u leeyahay inuu kormeero dhammaan Faallooyinka iyo inuu ka saaro wixii Faallooyin ah ee loo qaadan karo mid aan habboonayn, meel ka dhac ku ah ama sababa jebinta Shuruudaha iyo Shuruudaha.
Waad dammaanad qaadaysaa oo aad mataleysaa taas:
Waxaad xaq u leedahay inaad ku dhejiso faallooyinka boggayaga internetka oo aad leedahay dhammaan rukhsadaha lagama maarmaanka ah iyo oggolaanshaha inaad sidaas sameyso;
Faallooyinku ma soo weerarayaan xuquuqda lahaanshaha aqooneed, oo ay ku jiraan xaddidaadda xuquuqda daabacaadda, patentka ama calaamadaha ganacsiga ee dhinac saddexaad;
Faallooyinka kuma jiraan wax sumcad dilid ah, aflagaado ah, aflagaado ah, anshax xumo ah ama waxyaabo kale oo sharci darro ah oo duulaan ku ah asturnaanta
Faallooyinka looma isticmaali doono in lagu codsado ama lagu dhiirrigeliyo ganacsi ama caado ama lagu soo bandhigo waxqabadyo ganacsi ama waxqabad sharci darro ah.
Waxaad halkan ku siineysaa Khamaarka Papa-gareyn ruqsad aan gaar aheyn si loo isticmaalo, loo soo saaro, wax looga beddelo loona oggolaado kuwa kale inay isticmaalaan, soo saaraan oo ay wax ka beddelaan mid ka mid ah Faallooyinkaaga nooc kasta iyo nooc kasta, qaabab ama warbaahin.
Isku xirnaanta Mawduucyadeena
Ururada soo socdaa waxay kuxiran karaan shabakadeena iyagoon haysan ogolaansho qoraal ah kahor
Qeybiyeyaasha hagaha khadka tooska ah waxay ku xirmi karaan Websaydhadeenna si la mid ah sida ay ugu xirmaan Websaydhada ganacsiyada kale ee ku taxan; iyo
Nidaamyada Ganacsi ee la Aqoonsan yahay ee Nidaamka ballaadhan marka laga reebo weydiisashada ururada aan macaash doonka ahayn, suuqyada wax lagu iibiyo ee samafalka ah, iyo kooxaha lacag-ururinta samafalka ah ee aan laga yaabaa inay ku soo biiraan Websaydhkeenna.
Ururadan waxay kuxiran karaan boggayaga hoyga, daabacaadaha ama macluumaadka kale ee Websaydhka illaa inta isku xidhka: (a) uusan sinnaba u khiyaanayn; (b) si been ah uma tilmaamayso kafaalo qaadis, oggolaansho ama oggolaansho kooxda xiriirineysa iyo alaabteeda iyo / ama adeegyadeeda; iyo (c) waxay ku habboon tahay macnaha guud ee barta isku xirka.
Waxaan tixgelin karnaa oo oggolaan karnaa codsiyo xiriirinta kale ee ka imanaya noocyada soo socda ee ururrada:
macmiilka sida caadiga ah loo yaqaan iyo / ama ilaha macluumaadka ganacsiga;
ururada ama kooxaha kale ee matala hay’adaha samafalka;
qeybiyeyaasha hagaha khadka tooska ah;
xisaabinta, sharciga iyo shirkadaha latalinta; iyo
goobaha waxbarashada iyo ururada ganacsiga
Waxaan ansixin doonnaa codsiyada xiriirinta ee ururadan haddii aan go’aansano: (a) iskuxirku nagama dhigayo inaan si aan fiicnayn ugu eegin nafteena ama ganacsiyadayada la aqoonsan yahay; (b) hay’addu ma lahan wax diiwaanno taban ah annaga; (c) faa iidada ay naga siineyso muuqaalka kore ee ‘hyperlink’ waxay magdhabeysaa maqnaanshaha Khamaarka Papa; iyo (d) xiriirku wuxuu ku jiraa macnaha guud ee macluumaadka kheyraadka.
Ururradan waxaa laga yaabaa inay ku xirmaan boggeena guriga illaa inta xiriirku: (a) uusan sinnaba u khiyaanaynayn; (b) si been ah uma tusinayso kafaalo qaadis, oggolaansho ama oggolaansho kooxda xiriirineysa iyo alaabteeda ama adeegyadeeda; iyo (c) waxay ku habboon tahay macnaha guud ee barta isku xirka.
Haddii aad ka mid tahay hay’adaha ku taxan farqadda 2aad ee kor ku xusan oo aad xiiseyneyso isku xirka degelkeenna, waa inaad nagu soo wargelisaa adigoo emayl ugu diraya Khamaarka Papa. Fadlan ku dar magacaaga, magaca ururkaaga, macluumaadka xiriirka iyo sidoo kale URL-ka goobtaada, liistada URL kasta oo aad damacsan tahay inaad ku xirto Websaydhkeenna, iyo liistada URL-yada ku yaal boggayaga aad jeclaan lahayd isku xidhka. Sug jawaab celin 2-3 toddobaad ah.
Hay’adaha la oggolaaday waxay iskudhafan karaan shabakadeena sida soo socota:
Adeegsiga magaca shirkadeena; ama
Iyadoo la adeegsanayo astaamaha isku-xirnaanta kheyraadka ee lala xiriirinayo; ama
Adoo adeegsanaya sharaxaad kasta oo kale oo ku saabsan Websaydhadeena oo lala xiriirinayo taas macno ayay u samaynaysaa macnaha guud iyo qaabka ay u kooban tahay bogga isku xirka qaybta.
Looma adeegsan doono calaamadda Khamaarka Papa ama farshaxanno kale looma oggolaan doono isku xirka maqnaanshaha heshiiska liisanka sumadda ganacsiga.
Adigoon haysan ogolaansho hore iyo ogolaansho qoraal ah, ma abuuri kartid meerisyo ku wareegsan Bogaggeenna taas oo wax ka beddeleysa qaab kasta soo bandhigga muuqaalka ama muuqaalka Websaydhadeena
Annagu masuul kama noqon doonno wixii nuxur ah ee ka muuqda Websaydhkaaga. Waxaad ogolaatay inaad ilaaliso oo aad naga difaacdo dhammaan sheegashooyinka ka kacaya boggaaga. Ma jiro xiriiriye (yada) waa inay ka soo muuqdaan degel kasta oo loo turjumi karo fadeexad, fisqi ama dambi, ama mid xadgudub ku ah, haddii kale ku xadgudba, ama u doodaya ku xadgudubka ama ku xadgudubka kale, xuquuq kasta oo dhinac saddexaad ah.
Fadlan akhri Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Boos celinta xuquuqda
Waxaan xaq u leenahay inaan kaa codsano inaad ka saarto dhamaan xiriiriyeyaasha ama xiriir kasta oo gaar ah Website-keena. Waxaad ogolaatay inaad isla markiiba ka saarto dhamaan xiriiriyeyaasha shabakadeena markii aad codsato. Waxaan sidoo kale xaq u leenahay inaan ku faraxno shuruudahan iyo shuruudaha waana isku xirayaa siyaasada waqti kasta. Adoo si joogto ah ugu xiraya Websaydhadeena, waxaad ogolaatay inaad ku xirnaato oo aad raacdo shuruudaha iyo shuruudaha isku xirka.
Ka saarida xiriiriyeyaasha shabakadeena
Haddii aad ka hesho wax xiriir ah oo ku yaal Websaydhkeena oo sabab u ah sabab kasta ha noqotee, waxaad xor u tahay inaad la xiriirto oo aad noo soo sheegto daqiiqad kasta. Waan tixgelin doonaa codsiyada si aan uga saarno xiriiriyeyaasha laakiin innagu qasab kuma aha ama sidaas ama si toos ah ayaan kuugu soo jawaabi doonnaa.
Ma hubinayno in macluumaadka ku jira degelkan uu sax yahay, dammaanad kama qaadaynno dhammaystirkiisa ama saxnimadiisa; mana ballanqaadayno inaan hubinno in degelku weli diyaar yahay ama in waxyaabaha ku jira websaydhka la cusbooneysiiyo.
Ilaa inta ugu badan ee uu oggol yahay sharciga khuseeya, waxaan ka reebnaa dhammaan matalaadaha, damaanadaha iyo xaaladaha la xiriira degelkeenna iyo adeegsiga degelkan. Ma jiraan wax ku jira afeefkan:
xaddid ama ka saar annaga ama mas’uuliyaddaada geerida ama dhaawaca shaqsiyeed;
xaddid ama ka saar annaga ama mas’uuliyaddaada khayaano ama been abuur been abuur ah;
xaddid mid ka mid ah ama mas’uuliyadahaaga si kasta oo aan loo oggolayn sharciga ku habboon; ama
ka saar mid kamid ah ama masuuliyadahaaga oo laga yaabo inaan laga reebi karin sharciga quseeya.
Xaddidnaanta iyo mamnuucidda mas’uuliyadda lagu sheegay Qeybtan iyo meelo kale oo ka mid ah afeefkan: (a) waxay ku xiran yihiin sadarka hore; iyo (b) xukumaan dhammaan deymaha ka dhasha hoos u dhaca eedeynta, oo ay ku jiraan deymaha ku kacaya qandaraaska, jirdilka iyo jebinta waajibaadka sharciga.
Ilaa iyo inta websaydhka iyo macluumaadka iyo adeegyada ku jira websaydhka lagu siinayo lacag la’aan, annagu masuul kama noqon doonno wax khasaare ah ama waxyeello noockasta leh.